Okuhamba phambili kwe-YC-168 okuzenzakalelayo Amaprotheni Ball Machine Machine and Factory | Yucheng
Umugqa Wokukhiqiza Umshini Ogcwele we-Spring Automatic
Umshini we-YC-170 othomathikhi we-Crystal Moon Cake Machine
YC-170-1 okuzenzakalelayo Ultraonic Amakhukhi umsiki Ice ibhokisi ...
YC-168 okuzenzakalelayo Amaphrotheni Ball Machine
YC-170 Wire umsiki Panda Amakhukhi Machine Production ...
Umshini we-YC-168 Automatic Protein Ball Machine uhlanganisa izingxenye ezintathu:
1. ukwakha ingxenye
3. ingxenye yokumboza.
Lo mugqa ungasetshenziselwa ibhola ledethi, ibhola lamaprotheni, ibhola le-tamarind, ibhola le-bliss, njll.
YC-168 okuzenzakalelayo Amaphrotheni Ball Machine yakhiwa extruder futhi rounder roller umshini. Umshini waklanywa ngokuzimela yithimba lethu lonjiniyela. Umshini unosayizi omncane futhi sakhiwe ngokukhethekile kwebhizinisi elincane lefektri noma ukusetshenziswa kwesitolo sasekhaya.
Kulula ukwenza ibhola lokudla ngaphandle kokugcwaliswa kwangaphakathi. Umshini ojikelezayo ungenza imikhiqizo yakho ibe yindilinga eyengeziwe kunokwenza ngesandla. Futhi ungangeza umshini we-powder coater, ukumboza okunye okufana namakhukhunathi, imbewu, impuphu, ushukela, isesame, ushokoledi, imvuthuluka yesinkwa ebusweni bomkhiqizo wakho.
Amaprotheni Ball Ukwenza Machine Imininingwane:
Amandla 60-100 PC / MIN
Umkhiqizo Ububanzi 10-50MM
Amandla 220V / 50HZ
Ubukhulu 2400 * 860 * 1300MM
I-Yucheng YC-168 Model Protein Energy Ball Ukwenza Machine ekuqaleni yayenzelwe ukwenza imikhiqizo yebhola yosuku, ngemuva kweminyaka yokuthuthuka, umshini wokwenza amaprotheni ibhola manje usuyatholakala ukwenza izinhlobo eziningi zemikhiqizo yebhola, njengebhola ledethi, ibhola lamaprotheni, amandla ibhola, ikhekhe lenhlama yebhola, ibhola likakhukhunathi, ibhola le-bliss, ibhola le-chocolate truffle, ibhola le-tamarind, ikhekhe lokuluma, ibhola lenhlama, ibhola elibizayo, i-rum ball, i-Brigadeiros, ibhola leseame njalonjalo. Umshini webhola lamaprotheni ungomunye wemishini yethu esebenza ngemisebenzi eminingi.
Umshini wokwenza ibhola unamandla ungenza okunye ukudla ngaphandle kwemikhiqizo yebhola eshiwo ngenhla, njenge-snack bar, i-falafel, i-meatball, ibhola lenhlanzi, ibhola loshizi, i-arrancini, i-coxinha, amakhukhi, ophaya, amabhanisi, ukudla okubandayo, njll.
Umshini webhola lamandla uqukethe imishini emithathu: i-protein ball extruder, i-protein ball roller, umshini wokumboza kakhukhunathi.
Iprotein ball extruder ingumshini omkhulu wokukhipha nokusika inhlama noma ingxube, Inama-hopper amabili ohlangothini ngalunye: ohlangothini lwesobunxele lwesitokisi esivamile, ohlangothini lwesokudla lokugcwaliswa kwesikhungo. I-hopper ngayinye inezikulufo ezimbili zokuvundla ezakhelwe phezulu ukukhipha okokusebenza kusilungisi, bese kwehlela kwipayipi le-extrusion nombhobho, ekugcineni kusikwe yisivalo esiyindilinga. Iprotein ball extruder ingakha futhi isike inhlama ngayinye ngosayizi ofanayo nesisindo ngesisindo erro + -1gram.
Ngaphandle kwalokho, umshini wamaprotheni webhola lomenzi ukopisha ukusebenza ngesandla futhi usebenzisa uhlelo lokulawula lwe-PLC ngephaneli yesikrini sokuthinta, ngumshini ozenzakalelayo ngokuphelele.
Umshini we-protein ball roller ngumshini wesibili oxhunywe ngemuva komshini we-protein ball extrusion, umshini wokugoqa ibhola we-protien usebenzisa isakhiwo sensimbi esingenasici kanye nesondo lokugoqa i-aluminium ukugoqa ibhola ngalinye ngejubane eliguquguqukayo nokwelashwa okunamathelayo. Ibanga ububanzi ugingqe uhla 10mm kuya 50mm.
Umshini wokumboza we-coconut flake ubuye uhlanganise isakhiwo sensimbi engagqwali kanye nesigubhu esijikelezayo se-aluminium, ingagqoka ama-flakes kakhukhunathi, amantongomane aphihliwe, impuphu, imbewu, njalonjalo.
Ngaphandle kwalokho, i-protein ball extruder ingaxhumanisa nomshini wokusika ibha yosuku ukwenza amakhukhi wosuku nemigoqo yezithelo, futhi ixhumane nomshini wokushaya ama-maamoul ukwenza ama-maamoul nama-mooncakes.
Amaprotheni Ball Ukwenza Machine Izici:
1. Insimbi engagqwali 304, ihlangabezana nokudla okuhlanzekile.
2. Umkhiqizo ubukhulu10-50mm, isilinganiso nesivinini adjustable. Ubukhulu besisindo 100pcs / min.
3. Ukusebenza okuzenzakalelayo, ukwakheka okunengqondo, kuhlanzekile okulula.
Kungani umshini wakho wokwenza ibhola ungenza imikhiqizo eminingi kangaka ehlukene yebhola?
Umshini wethu wokwenza amaprotheni ibhola uyimisebenzi ehlukahlukene yemodeli yomshini equkethe umshini wokuxhuma, wokugoqa nowokumboza. Iphrotheyitha ibhola lomshini we-hopper lisebenzisa izikulufu ezinkulu ezivunguza kabili ngokuvundlile ukukhipha izinto ngamandla amakhulu, futhi i-hopper nezikulufo kufakwe i-teflon ukubamba izinto ezinamathelayo. Umshini wokugoqa amaprotheni nebhola likakhukhunathi elinamathela umshini wasebenzisa isakhiwo sezinto ze-aluminium, nazo zigoqiwe nge-teflon. Kungakho umshini wethu wokwenza amaprotheni ibhola ungenza izinhlobo eziningi zemikhiqizo noma ngabe ziyizinto ezahlukahlukene noma ifomula.
Yimiphi eminye imikhiqizo yebhola engenziwa umshini wokugoqa ibhola wamaprotheni?
Umshini wokugoqa amaprotheni ungenza eminye imikhiqizo yebhola efana ne-rum ball, i-Brigadeiros, i-chocolate truffles, i-oatmeal ball, ikhekhe lokulunywa, ibhola likakhukhunathi, ibhola leseame, ibhola le-mazipan, ibhola elibizayo, i-Bunuelos, i-cheese ball, ibhola lezambane nokunye. Ngakho-ke umshini wokwenza amaprotheni ibhola wumshini wokwenza i-rum ball, umshini wokwenza ama-brigadeiros, umshini wokwenza ushokoledi, umshini wokwenza ibhola we-sesame, njll.
Ungakwazi yini umshini wamaprotheni ibhola ukwenza okunye ukudla?
Umshini wethu wamaprotheni ibhola ungenza okunye ukudla futhi. Ngaphandle komshini we-protein ball roller nomshini wokumboza kakhukhunathi, umshini omkhulu yi-protein ball extruder, okuyi-YC-168 model yethu ye-Automatic Encrusting Machine. Umshini we-protein ball extuder wenzelwe ukwenza ukudla kokugcwalisa nokungagcwalisi okufana namakhukhi, ama-maamoul, ama-roll roll, ophaya, ukudla okufriziwe, njll. Ngemininingwane engaphezulu, sicela ubuke umshini wethu we-YC-168 Automatic Encrusting Machine.
Ngabe usayizi webanga elingakanani ongenziwa ngumshini webhola le-protein energy?
Imvamisa, umshini wamaprotheni wamandla webhola ungenza ububanzi bebhola kusuka ku-10mm kuye ku-50mm, singenza ngezifiso usayizi omkhulu uma ikhasimende lidinga, ngokwesibonelo, senze ibhola le-65mm ububanzi ukuze ikhasimende lethu laseCanada lenze amandla ebhola.
Yisiphi isisindo esilula kakhulu esenziwa umshini wakho webhola lamandla?
Imvamisa umshini wethu webhola lamandla ungenza ibanga lesisindo sokudla lisuke ku-10g liye ku-250g, isisindo esincane kunazo zonke esake sazenza ngu-6g.
Zingaki isikhunta nesondo eligingqekayo ohlinzeka ngalo kumshini wokwenza ibhola wamandla?
Umshini owodwa unengxenye eyodwa yesikhunta semilomo nesondo eligingqikayo. Uma ikhasimende lidinga okungeziwe, sidinga ukukhokhisa intengo yezindleko.
Kuthiwani uma nginamasayizi angaphezu kwelilodwa ebhola, umshini wakho wokugubha ibhola ungawenza?
Umshini wethu wokugoqa ibhola unamandla wesondo elilodwa lokugingqika. Uma ikhasimende linobukhulu obungaphezu koyedwa bebhola nobubanzi bebhola lingaphezulu kuka-2mm, siphakamisa ukuthi ikhasimende lithathe isondo elengeziwe lokugoqa. Iningi lamakhasimende ethu linosayizi owodwa webhola, ambalwa kuwo anamasayizi amabili.
Okwe-roller yebhola yamandla, Iyini impahla yesondo eligingqekayo? Ingabe unayo isondo elishibhile lokugoqa uma osayizi abaningi bebhola?
Isondo eligingqikayo lomshini wethu we-roller ball roller izinto ze-aluminium ezine-teflon camera. Kuyabiza kancane, kepha le nto izinzile futhi inamandla ekugingqeni nakwimvelo ngokwengeziwe yokukhiqiza ukudla. Kukhona isondo elishibhile lokugingqika elenziwe ngepulasitiki, inkampani yethu engakhiqizi ngalo.
Ngabe umshini wakho wokwenza ibhola ojabulisayo utholakalela ukukhipha ushokoledi noma ama-granules?
Umshini wokwenza ibhola we-bliss ungabamba ushokoledi chips noma ama-granules ngosayizi ngaphakathi kwe-4mm, nakuma-chips amakhulu we-chocolate, uzophuka kalula futhi uncibilike ngesikhathi se-extrusion. Futhi ama-granules amakhulu azoba nzima ukukhipha. Amashokholeti ushokoledi nama-granules abanalo uthando kumshini wethu wokugoqa ibhola. Umshini wethu we-bliss ball australia uthengiswa kahle kakhulu ngenxa yekhwalithi yawo enhle.
Yiziphi izinto ongazisebenzisela ijazi lomshini kakhukhunathi?
Umshini wethu we-coconut flake ungagcoba ama-flakes kakhukhunathi, imbewu yesesame, imbewu yezithelo, amantongomane aphihliwe, ama-chip chips, izimpushana ezisuselwe, njll.
Ngabe amandla akho okuluma enza umshini enze ukugcwaliswa kwesikhungo noma ibhola eligxishiwe? Uma kunjalo, yiziphi izinto zokwakha ezingasetshenziselwa ukugcwalisa?
Umshini wethu wokuluma amandla ungenza ibhola lokugcwalisa isikhungo, izinto zokugcwalisa zingaba ujamu, ibhotela lamantongomane, unamathisele ushokoledi, unamathisele izithelo, uketshezi lukashokoledi, njll.
Yini ikheshi langaphandle lokugcwalisa isabelo somshini wakho wokuluma umshini we-extruder?
Isilinganiso sokufaka sangaphandle nesikhungo sokugcwalisa ngu-1: 9-10: 0.
Ingabe amaprotheni akho alumayo enza umshini wenze ukuma kwebha? Ngabe sidinga ukungeza imishini eyengeziwe?
Umshini wokwakha amaprotheni ungenza umkhiqizo womumo webha ngokungeza umshini owengeziwe wokusika ohlukaniswe ulawulwa uhlelo lwe-PLC ngesikrini sokuthinta.
Kuthiwani uma impahla yami incangathi noma inzima kakhulu? Ungahlulela kanjani?
Umshini wokwenza amaprotheni ibhola ulungele kuphela ingxube ethambile naphakathi nendawo, inhlanganisela enamathelayo izonamathela ku-shutter nebhande lokuhambisa. Lapho-ke ungakhuphula kanjani ubulukhuni ne-viscosity?
Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kweyishumi kumshini wamaprotheni ibhola, sihlolisise izinkulungwane zezinto zamakhasimende. Okokuqala, Singahlulela ngokuyisisekelo ngokubona izithombe zebhola; Okwesibili, singahlulela ngokubuka amavidiyo wengxube yekhasimende. Kumele kube yinhlanganisela entsha eyenziwe kabusha, imvamisa sidinga ukuthi ikhasimende liyikhame ngesandla ingxube, ukuze sikwazi ukwahlulela ubulukhuni ne-viscosity ngasikhathi sinye. Uma kuyinhlama eqinile, kuzoba nzima ukuyikhama ngesandla, Uma kuyinhlanganisela enamathelayo, ngeke iwe esandleni sakho noma ngeke iphume ebhandeni lakho. Okwesithathu, sidinga ukuthi ikhasimende lisithumelele uhlu lwazo lwezinto ezisetshenziswayo, ifomula enemininingwane izokhethwa kuqala. Ekugcineni, uma singakwazi ukwahlulela, sizodinga ukuthi ikhasimende lisithumele izinto zalo ngendiza, sihlola lapha efektri yethu.
Ngabe umshini wamaprotheni ibhola extrusion, umshini wamaprotheni ibhola roller, umshini wokumboza kakhukhunathi ungaxhunyaniswa ube umugqa ogcwele othomathikhi?
Yebo, Imishini emithathu ingaxhunywa ndawonye ngamunye ngamunye, umshini ngamunye uhlukanisiwe, kulula ukuhambisa nokulawula.
Imiphi eminye imishini edingekayo ekukhiqizeni ibhola?
Umshini webhola lamandla udinga ugesi kuphela, ayikho enye imishini nomthombo wamandla odingekayo.
Singamane sithenge i-roller yebhola yamandla kuphela?
Ikhasimende lingathenga umshini webhola we-roller kuphela, kepha ngaphandle kwe-extruder yenhlama, ikhasimende kufanele lenze izingcezu zenhlama ngayinye ngesandla, bese lithatha izingcezu zomshini ngamunye wokugoqa ibhola ngesandla. Ngale ndlela kuzomosha amakhasimende eziningi zabasebenzi nesikhathi. Ngaphandle kwalokho, ukusika ucezu ngalunye lwenhlama 'Ukuqinisekisa isisindo senhlama, ikhasimende kufanele lilinganise inhlama ngayinye ngayinye, akusona isixazululo esisebenza kahle. Ngamafuphi, siphakamisa ukuthi ikhasimende lithathe umshini wamandla we-bar extrusion ndawonye.
Ingabe umshini wokumboza ukhukhunathi uyimishini edingekayo? Singayengeza kamuva ngokuzayo?
Umshini wokumboza kakhukhunathi akuyona imishini edingekayo. Ikhasimende lingangeza ngokuhamba kwesikhathi ngokuzayo. Umshini we-protein ball extrusion nomshini we-protein ball rolling yimishini edingekayo. Uma ikhasimende linemfuneko yokumboza, ingakufeza ngokusebenza ngesandla.
Unawo umshini wokumboza omkhulu?
Sinomshini wohlobo lokumboza wethebula, ngumthamo omkhulu kakhulu ongasetshenziselwa imishini eminingana yokwenza ibhola.
Unawo umshini wokupakisha we-protein ball?
Sine-flow type protein ball packaging machine no-vertical type protein ball packaging machine ukuze ikhasimende likhethe, sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Singakwazi ukuhlola umshini webhola lamandla ngaphambi kokuthenga? Sivivinya kanjani?
Amakhasimende amukelekile njalo ukuhlola umshini wethu wamaprotheni ibhola. Imvamisa kunezindlela ezimbili zokuthi ikhasimende livivinye umshini wethu wokwenza amaprotheni ibhola: 1. Ikhasimende lisivakashela mathupha noma liphathise umuntu wesithathu ukuthi asivakashele siyohlolwa. 2. Ikhasimende lisithumela izinto zalo zokusetshenziswa nefomula, sihlola ikhasimende.
Ikhasimende lingakhetha indlela elula kunazo zonke elifunayo. Kwamanye amakhasimende angakulungeli ukusithumela izinto zokwakha, singasiza ukuthenga izinto zasendaweni.
Kuthiwani uma umshini wokwenza i-rum ball ungakwazi ukwenza ibhola lami ngemuva kokuhlolwa? Singakwazi ukubuyisa imali?
Uma umshini wethu wokwenza i-rum ball ungakwazi ukwenza izinto zamakhasimende ngemuva kokuhlolwa, siyavuma ukubuyiselwa imali ngokuphelele.
Ngabe amandla we-roller roller voltage voltage angenziwa ngezifiso, ngokwesibonelo 380V?
I-protein ball roller machine voltage ingenziwa ngezifiso nge-380V noma i-110V. Singangeza i-transformer yekhasimende. Umshini wokwakha amaprotheni ibhola nawo ungenziwa ngezifiso nge-220V, izigaba ezintathu. Umshini wethu wamaprotheni ibhola umenzi ojwayelekile u-220V, isigaba esisodwa.
Ngabe unezingxenye zokungcebeleka zalo mshini wokuluma amandla, ukuthi uwushintshe kangaki?
Isethi eyodwa yezingxenye zokungcebeleka izothunyelwa kanye nomshini wokulunywa kwamandla. Izingxenye zokungcebeleka zifaka ibhokisi lesondlo, izindandatho zokufaka uphawu, imibhobho eyengeziwe, njll.
Umshini wokwenza amandla okuluma unokusimama okuhle ngekhwalithi, asikho isidingo sokushintsha izingxenye ezisele uma nje zingaphukile.
Uma ikhasimende lidinga izingxenye ezengeziwe ze-roller yokuluma amandla ngokuzayo, singathumela ikhasimende ngqo ngendiza kungakapheli izinsuku ezintathu.
Yini iwaranti yakho ngomshini wokwenza ushokoledi truffle? Kuthiwani uma umshini we-chocolate truffle wephukile?
Okomshini wokwenza ushokoledi truffle, Iwaranti yethu iyizinyanga eziyi-12, insizakalo yesikhathi sempilo.
Sizobophezela ukunakekelwa komshini ngaphandle kwenkokhiso ngesikhathi sewaranti uma inkinga yomshini ibangelwe ngakithi. Ngemuva kwesikhathi sewaranti, Sisaqhubeka nensizakalo yethu, sikhokhisa kuphela inani lentengo yamakhasimende ngezingxenye ezilimele, futhi sithumela ikhasimende izingxenye ezisele ngomoya ngokushesha okukhulu.
Ingabe lo mshini webhola likashokoledi udinga ukufakwa nokuqeqeshwa?
Unjiniyela wethu uhlala etholakala ukufakwa uma ikhasimende lidinga; Njengoba umshini webhola le-chocolate usayizi omncane, uphelele futhi uthunyelwe kumakhasimende, ngakho-ke akukho ukufakwa okudingekayo; futhi umshini wokwenza ushokoledi ibhola ugcwele ukulawula okuzenzakalelayo nge-PLC nge-touch screen, okwenza kube lula ukusebenza ngezinombolo ezisebenzayo esikrinini, Sinemininingwane yokufundisa nokusebenza kwamavidiyo wokuqeqeshwa kwamakhasimende; okokugcina, sineqembu lezinsizakalo elisekelayo kwinsizakalo elayini.
Uma ikhasimende lidinga insizakalo yethu yokufaka nokukhokhisa, sizohlela ukufaka i-visa nokuhlela unjiniyela.
Ngabe unazo izitifiketi zomshini webhola lamandla kagesi?
Ngomshini womenzi webhola lamandla, sinesitifiketi se-CE.
Yimaphi amazwe othengise kuwo lo mshini webhola lamandla?
Umshini wokwenza amaprotheni wenza ikakhulu ibhola ledethi, ibhola lamandla ne-protein ball. Imakethe yethu enkulu yi-USA, UK, Australia, India, Middle East. Umshini wethu wamaprotheni ball australia uthengiswa kahle kakhulu ngokwenza amaprotheni ibhola nebhola le-bliss. Umshini wokugoqa amaprotheni e-australia ungenza yomibili imikhiqizo yamaprotheni ibhola nemikhiqizo yamaprotheni. Umshini wethu wokwenza ushokoledi truffle uthengiswa kahle eYurophu naseNingizimu Melika, ikakhulukazi e-UK naseChile. Umshini wethu wokwenza ibhola wosuku uthengiswa kahle eMpumalanga Ephakathi, ikakhulukazi eDubai.
Siyini isikhathi sakho sokulethwa somshini wokwenza ushokoledi ibhola?
Sinebhokisi likashokholethi elenza umshini wesitoko, singaletha ngeviki lekhasimende.
Yini impahla yokupakisha yomenzi we-chocolate truffle?
Umenzi we-chocolate truffle usebenzisa ibhokisi eliqinile lokuthekelisa elithunyelwa ngaphandle, mahhala.
Kuyini ukuthuthwa kwale mishini ye-chocolate truffle?
Sine lokuthumela kanye nendiza ukuze ikhasimende ukhethe ezokuthutha. Imishini ye-chocolate truffle ayinkulu, uma ikhasimende ligijimela, lingacabanga ukuthuthwa ngendiza. Singahlela lapha uma ikhasimende lingenawo umenzeli.
Uyini isikhathi sakho sokukhokha kumshini wokwenza ibhola wamandla?
Isikhathi sethu sokukhokha singama-30% wediphozi njengokukhokha phansi, Ukuphumula okungu-70% kukhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
Indlela oda amandla ibhola ukwenza umshini?
Ngemuva kokuthi ikhasimende liqinisekise i-oda, Sizodonsela ngokusemthethweni ikhasimende i-invoice esemthethweni enemininingwane eminingi yemishini yamaprotheni ibhola, amagama okuhweba kanye nemininingwane yethu yasebhange. Ikhasimende lingakhetha ukudluliswa kwebhange, ikhadi lesikweletu noma ezinye izindlela zokuhlela ukukhokha okuphansi okungama-30%.
Ngemuva kokuthola ukukhokha okuphansi kwekhasimende, sizokwazisa ikhasimende futhi siqale ngokusemthethweni i-oda lokwenza umshini webhola lamaprotheni.
Ngakho konke okushiwo, iyini intengo yomshini wokwenza ibhola wamaprotheni?
Njengomkhiqizi ophezulu nesazi somshini webhola le-protein energy, intengo yethu yomshini wamaprotheni ibhola izoba nokuncintisana kakhulu futhi inengqondo. Ngokwazi intengo yamandla okwenza umshini webhola, sicela uxhumane nathi ngokushesha ukuthola okusha kanye namanani entengo!
Langaphambilini I-YC-170 Wire Cutter Panda Cookies Machine Production Line
Olandelayo: I-YC-170-1 i-Automatic Ultraonic Cookies Cutter Ice box Amakhukhi Umshini
umshini wamaprotheni ibhola
YC-170-1 okuzenzakalelayo Ultraonic Amakhukhi umsiki Ice ...
YC-168 Ushizi Okuzenzakalelayo Egcwaliswe Croquette Encrus ...
Ikhwalithi ephezulu tamales okwenza ukwakha encrusting ...
YC-168 okuzenzakalelayo Brazil Inkukhu Coxinha Encrust ...
Umshini we-YC-170 othomathikhi wokugcwalisa amakhukhi
YC-170-2 okuzenzakalelayo Encrusting Machine Nuts Pist ...